दोस्रो चरणको निर्वाचन कति सफल ? यस्तो भन्छन् प्रमुख निर्वाचन अायुक्त यादव’ « Deshko News
दोस्रो चरणको निर्वाचन कति सफल ? यस्तो भन्छन् प्रमुख निर्वाचन अायुक्त यादव’
स्थानीय तह निर्वाचन, मतदातामा देखिएको उत्साह, मतगणनामा भएको ढिलाइ, निर्वाचन आचारसंहिता पालनालगायत समसामयिक विषयमा प्रमुख आयुक्त डा यादवसँग लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :
आयोगको व्यवस्थापकीय काम सफल रहेको छ, मतदानमा मतदाताको उत्साहपूर्वक सहभागिता रह्यो, राजनीतिक दल र उम्मेदवारबाट पनि उत्तिकै सहयोग भयो । स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित निर्वाचनको सफलताको श्रेय चाहिँ मतदातालाई दिन चाहन्छु । अहिलेसम्मकै सबैभन्दा सफल निर्वाचनका रुपमा दोस्रो चरणको निर्वाचन भएको छ ।
मतदाताको ज्यादै उत्साहजनक सहभागिताले निर्वाचन सफल भएको हो । यो निर्वाचन इतिहासमै स्मरण गर्नयोग्य रहेको हँुदा आयोगले सफल व्यवस्थापनको रुपमा पनि मूल्याङ्कन गरेको छ ।
निर्वाचनका लागि आयोगलाई हर क्षेत्रबाट सहयोग प्राप्त भएको छ । आयोगलाई कतिपय अवस्थामा अप्ठेरो त निश्चित रुपमा भएकै हो । वैशाख ३१ मा एकै चरणमा भए प्रकृतिको प्रतिकूलता व्यहोर्नु नपर्ला र सजिलोसँग राम्रो व्यवस्थापन गर्न सकिएला भन्ने अनुमान गरेका थियाै, राजनीतिक वातावरण मिलाउने सन्दर्भमा जेठ ३१, असार ९, १३ हुँदै १४ गतेका लागि सरेपछि ज्यादै अप्ठेरो परिस्थितिमा परेका थियौँ ।
मौसमको प्रतिकुलता प¥यो भने अप्ठेरो हुन्छ भन्ने थियो । त्यसपछि पनि राजनीतिक दलबीच निर्वाचनप्रति सहमति, असहमति निरन्तर चलिरह्यो । त्यस संवादबाट एउटा राम्रो सन्देश प्राप्त भयो र सबैको सहयोगबाट मिति सरेर पनि अत्यन्तै शान्तिपूर्ण र स्वच्छ वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न भयो । वर्षायाम सुरु भएपछिको निर्वाचनमा ७४ प्रतिशतको हाराहारीमा मतदान हुनु भनेको इतिहासकै ठूलो उपलब्धि हो, अहिलेसम्म स्थानीय निर्वाचनमा यस्तो भएकै थिएन ।
विभिन्न खाले सरोकारवालामध्ये निर्वाचनको प्रमुख साझेदार भनेका राजनीतिक दल नै हुन् । निर्वाचनको कार्यक्रम अर्थात् मनोनयन शुरु भइसकेपछि उम्मेदवारको पनि भूमिका हुन्छ, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, पर्यवेक्षक, बुद्धिजीवी, पूर्वआयुक्त, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र सबैबाट सकारात्मक रुपमा राम्रो सहयोग प्राप्त भयो ।
सबैको सहयोगको फलस्वरुप विश्व समुदायमा नेपालले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ, यो सबैको सहयोगबाट नै भएको हो ।
आचारसंहिताको पालना सबैको लागि हो । निर्वाचनमा यो सबैले पालना गर्नुपर्दछ । दलहरुबाट आचारसंहिता पालना भएकै कारण पहिलो चरणको निर्वाचनमा मतदाता, उम्मेदवार र राजनीतिक दलको उत्साह देखिएको हो ।
केही स्थानबाहेक आचारसंहिताको परिधिभित्र रहेर नै प्रचारप्रसारको भएको पाइयो तर केही स्थानमा आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटना भने नभएका होइनन् । त्यसका लागि आयोगबाट ध्यानाकर्षण गराउने, स्पष्टीकरण सोध्ने र सचेत गराउने काम भएको छ ।
पहिलो चरणको निर्वाचनमा मन्त्री नै बोलाएर निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको जानकारी गराउँदै जिल्ला सदरमुकामभन्दा अन्यन्त्र नजान भनेका थियौँ । त्यसपछि आचारसंहिता अलि खुकुलो पारेका हौँ ।
पहिलो चरणको निर्वाचनमा त्यतिकै सफलता प्राप्त भएको होइन, प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जनताले राखेका वैध हातहतियार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सङ्कलन गर्न आदेश दियौँ । फलस्वरुप निर्वाचनमा हातहतियारको प्रयोग हुन पाएन । यो सफलताको एउटा सूचक हो । मदिरा बेचबिखन र प्रयोगमा नियन्त्रण हुनु भनेको पनि सकारात्मक पक्ष नै हो ।
आचारसंहिताको पालना गर्ने गराउनेमा विभिन्न पक्ष र विचारबाट अघि बढेका छौँ । आयोगले कतिपय संवेदनशील स्थानमा उच्चस्तरीय अनुगमन टोली र सूक्ष्म अनुगमनकर्ता खटाइएको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतलाई पनि कारबाही गर्ने अधिकार दिएका थियौँ ।
आचारसंहिता पालना सबैबाट भएको हुँदा निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र र शान्तिपूर्ण भएको हो । मतगणनामा केही ढिलाइ भए पनि आफ्नो ट्रयाकबाट अघि बढ्नु भनेको आचारसंहिताको पालना गर्नु नै हो । यद्यपि आचारसंहिताको पालनाको विषयलाई अझै सुधार गर्न आवश्यक छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको वातावरण बनाउन आमसञ्चारमाध्यमबाट ज्यादै ठूलो सहयोग रह्यो । निर्वाचनसँग सम्बन्धित सबै समाचारलाई उच्च प्राथमिकता दिएर प्रसारण र प्रकाशन भएका छन् । मिडियाबाट प्राप्त सहयोगको आयोगले उच्च मूल्याङ्कन गरेको छ ।
निर्वाचनको वातावरण बनाउन मिडियाले ज्यादै सकारात्मक भूमिका खेलेको छ । राष्ट्र, जनताप्रतिको जिम्मेवारी बोध गर्दै निर्वाचन गर्ने÷गराउने कामप्रति समग्रमा आमसञ्चारमाध्यमले सकारात्मक रुपमा राम्रो भूमिका निर्वाह गरेको छ ।
समाजिक उत्तरदायित्वप्रति मिडियाको ठूलो भूमिका रहेको छ, राजनीतिक दल, उम्मेदवार र कर्मचारी मिडियासँग डराउनु भनेकै सामाजिक दायित्वसँग जोडिएको छ । निर्वाचन भनेको सोसल साइन्सको विषय हो । समाजलाई जागृत तुल्याउने काममा मिडियाको ठूलो भूमिका हुने गर्दछ ।
निर्वाचनको बेलामा मिडियाकै पनि अनुगमन गर्न प्रेस काउन्सिललाई जिम्मेवारी दिइएको छ । नेपाली जनताको लोकतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने महान् इच्छालाई सहयोग पु¥याउने ढङ्गबाट पत्रकारले कलम चलाउनुपर्दछ । संविधानले त्यसैका लागि मिडियालाई असीमित अधिकार दिएको छ ।
पहिलो चरणको निर्वाचनमा घरबाट निस्कनेबित्तिकै ललितपुरको महेन्द्र आदर्श मतदान केन्द्रमा मतदाताको ठूलो लाइन र उत्साह देखेर साह्रै भावुक भएँ । निर्वाचनको सन्दर्भमा मतदाताको सहभागिता र उत्साह नै ठूलो उपलब्धि हो । निर्वाचनमा मतदाता सहभागी हुन्छ कि हुँदैनन् भन्ने द्विविधा थियो ।
लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल, उम्मेदवार र मतदाता सबैभन्दा ठूला शक्ति हुन् । धैर्य, संयम र उत्साहका साथ आआफ्नो लाइनमा बसेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा रेकर्ड कायम गर्ने ढङ्गबाट मतदान भएको छ, जसबाट लोकतन्त्र, सङ्घीयता र गणतन्त्र कार्यान्वयन निकै ठूलो योगदान भएको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको कार्यान्वय पनि सुनिश्चित भएको छ ।